Effects of LSCS on upcoming pregnancies - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
တစ်ခါခွဲမွေးပြီးရင် နောက်တစ်ခါ ရိုးရိုးမွေးလို့မရတော့ဘူးလား?
ကိုယ်ဝန်နောက်တစ်ကြိမ် ရှိလာသလို သင့်နောက်ဆုံးကလေး မွေးစဉ်ကလဲ ဗိုက်ခွဲမွေးထားခဲ့ပြီး ဒီတကြိမ်မှာ ရိုးရိုးမွေးရင် အဆင်ပြေမလားဆို သင်သိချင်မိမှာပါ ။ ဒီလို ဗိုက်ခွဲမွေးပြီး ရိုးရိုးပြန်မွေးတာဟာ အမျိုးသမီး အများအပြားအတွက်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း သင့်အတွက် ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်အချက်အလက်များပေါ်မူတည်ပြီး သင့်လျော်ခြင်းရှိမရှိ ဆရာဝန်မှ ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မှာပါ ။
လုံခြုံစိတ်ချရမှုဟာ သင်နဲ့သင့်ကလေးအတွက် အဓိက စဉ်းစားရမယ့်အရာပါပဲ ။ ဒီလိုဗိုက်ခွဲပြီး ရိုးရိုးပြန်မီးဖွားတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းအတွက် မလုံခြုံနိုင်ပါဘူး ။
ဆရာဝန်နှင့် မတိုင်ပင်ဘဲ ဒီလို မွေးဖို့ကြိုးစားတာဟာလဲ အန္တရာယ် အရမ်းကြီးမားလွန်းပါတယ် ။ သင်တင်မက သင့်ရင်သွေးကိုပါ အသက်အန္တရာယ်အပါအဝင် နောက်ဆက်တွဲ အန္တရာယ် အများအပြား ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ အလွန်တရာအရေးကြီးပါတယ် ။
သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ?
သင်နှင့်သင့်ဆရာဝန်မှ ရိုးရိုးပြန်မွေးတော့မည်ဟု စဉ်းစားပြီးလျှင် သင်ရော သင့်ကလေးရော ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိရန် လိုအပ်ပါတယ် ။ အမြွှာပူးဖြစ်နေလျှင်တောင်မှ သင်ရော သင့်ကလေးတွေရော ကျန်းကျန်းမာမာ ရှိနေကြောင်း သင့်ဆရာဝန်မှ ပြောကြားပါက သင့်အနေနဲ့ ရိုးရိုးမီးဖွားဖို့ ကြိုးစားနိုင်ပါတယ် ။
သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ သင့်ကို ခွဲစိတ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်မှာ ရိုးရိုးမွေးသင့်မသင့် အောက်ပါအတိုင်း အန္တရာယ်ရှိသော အချက်အလက်များပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။
* အဝလွန်ခြင်း ( သင့် BMI အညွှန်းကိန်းသည် ၃၀ ထက်ကျော်လွန်နေခြင်း )
* ကိုယ်ဝန်ကာလအတွင်း သွေးတိုးခြင်း
* ခွဲမွေးခြင်းသည် လွန်ခဲ့သော ၁၉ လ က ဖြစ်ခြင်း
* ကလေး အလွန်ကြီးခြင်း
ယခင်ခွဲစိတ်ဖူးသည့် ချုပ်ရိုး အမာရွတ် အနေအထား ?
နောက်ထပ် အဓိက စဉ်းစားရမယ့် အရာတစ်ခုကတော့ သင်ယခင်မွေးစဉ်အခါက ဘယ်လိုခွဲစိတ်မှုမျိုး အနေအထားနဲ့ ခွဲမွေးခဲ့သလဲဆိုတာပါပဲ ။
ဆရာဝန်များအနေနဲ့ ဗိုက်နဲ့ သားအိမ်ကို ခွဲမွေးရာမှာ ဦးတည်ရာ နှစ်မျိုးနဲ့ ခွဲပါတယ်
* အပေါ်အောက် ဒေါင်လိုက် ခွဲမွေးခြင်း
* တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့ ကန့်လန့်ဖြတ် ခွဲမွေးခြင်း
တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ အပေါ်အောက် ဒေါင်လိုက်ခွဲပြီး မွေးထားတယ်ဆိုပါက နောက်တစ်ခါရိုးရိုးမွေးရန် မဖြစ်နိုင်တော့ပါ ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သင့်အနေနဲ့ အနာချုပ်ရိုးပွင့်သွားပြီး စုတ်ပြဲနိုင်တဲ့အလားအလာ အရမ်းများတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ။
သင့်အနေနဲ့ ကန့်လန့်ဖြတ် ခွဲမွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ တခြားအချက်များပေါ်မူတည်ပြီး သင့်ဆရာဝန်မှ ခွင့်ပြုပေးချင် ပေးနိုင်ပါတယ် ။
သင့်အနေနဲ့ ယခုလို ခွဲစိတ်ပြီး တစ်ဖန် ရိုးရိုးမွေးမည်ဆိုပါက သင့်ဆရာဝန်ကို သင်တက်မည့် ဆေးရုံတွင် ယခုကဲ့သို့မွေးဖွားခြင်းကို ခွင့်ပြုမပြု မေးမြန်းရန် လိုအပ်ပါတယ် ။ ဆေးရုံတိုင်း အဆင်မပြေပါဘူး ။
သင့်အနေနဲ့ ယခင် ချုပ်ရိုးဟောင်း ကွဲထွက်နိုင်ခြေအမြဲရှိနေသည့်အတွက် အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာပါက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုရှိသည့် ဆေးရုံဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါတယ် ။
ကလေးမွေးပြီး ၄၅ရက်မပြည့်ခင် လိင်ဆက်ဆံမယ်ဆို ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ